पार्टी एकताबारे ओली र प्रचण्डले थप गृहकार्य गर्ने : बामदेव गौतमको नेतृत्वमा समृद्धि कार्यदल – HamroSamrachana
पार्टी एकताबारे ओली र प्रचण्डले थप गृहकार्य गर्ने : बामदेव गौतमको नेतृत्वमा समृद्धि कार्यदल
हाम्रो संरचना । ७ माघ २०७४, आईतवार २२:०९
७ माघ,काठमाडौं/ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सकिएको छ । बैठकले सुशासन र विकासबारे योजना बनाउन एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
नयाँ सरकारको सुशासन र विकासका प्राथमिकताबारे सुझाव दिन एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा एमालेबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, डा. युवराज खतिवडा, डा. विजय पौडेल रहनुभएको छ भने माओवादीबाट वर्षमान पुनसहित तीन जना रहेका छन । यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यको सिट बाँडफाँट अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यको सिट बाँडफाँट अनुमोदन गरेको छ । यसबारे सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यदलले नै थप गृहकार्य गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यदलमा एमाले ४ र माओवादी केन्द्रले २ मुख्यमन्त्री लिने लगभग सहमति देखिन्छ । तर, माओवादीले एमालेले मुख्यमन्त्री पाएका ठाउँमा आफूले सभामुख पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ भने एमालेले सभामुख पनि २ मात्र लिन प्रस्ताव गरेको छ ।
पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले राष्ट्रियसभाको ४३ सिट मध्ये २९ एमाले र १४ माओवादीले लिने कार्यदलको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । नयाँ सरकारको सुशासन र विकासका प्राथमिकताबारे सुझाव दिन एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा एमालेका भीम रावल, युवराज खतिवडा, विजय पौडेल छन् भने माओवादीबाट वर्षमान पुनसहित तीन जना छन् ।
बैठकमा पार्टी एकताबारे छलफल भएपनि ठोस कुनै निर्णय नभएको नेताहरुले बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको एक नेताले बताए । दुई अध्यक्षबीच छलफल भएपछि समितिको बैठक बस्ने र संगठन तथा वैचारिक विषयमा गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाउने समझदारी भएको छ ।
मनाङ र मुस्ताङमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमाले बिजयी,वाम गठबन्धन ३१ र नेपाली कांग्रेस ४ सिटमा अगाढी
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट छुटनै लागेका ५ ट्रक गुणस्तरहिन चामल पक्राउ,कोहलपुरमा पक्राउ परेको मोलमोलाईमा छुटयो,नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालमा ४ ट्रक शसस्त्रको कडा निगरानीमा